एकता हुने बित्तिकै किन जाँदैछन् ओली गृहमन्त्रालय ? - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
एकता हुने बित्तिकै किन जाँदैछन् ओली गृहमन्त्रालय ?
Published On : ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १२:१२
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समयपछि गृहमन्त्रालय जादैंछन्। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरणको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्र दिवसको तयारी बैठकको जानकारी लिन गृह जान लागेका हुन्।
मन्त्रालय स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र दिवस तयारीबारे ब्रिफिंग लिनेछन् एवं तयारी बैठकमा निर्देशन दिनेछन्। प्रधानमन्त्री मन्त्रालयको तयारी बैठकमा सहभागी हुन लागेको सम्भवत यो नै पहिलो घटना हो।
गत वर्षहरूमा गणतन्त्र दिवसमा सरकारले प्रदान गर्ने पदक एवं विभूषण विवादित बनेको बारे पनि प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएको स्रोतले बतायो। यसअघि गृहसचिव रहेका हालका मुख्यसचवि लोकदर्शन रेग्मीले यो वर्ष पनि पुनः आफूले आफैँलाइ पदकका लागि सिफारिश गरेको स्रोतले बतायो। गत वर्ष गृहसचिव हुँदा रेग्मीले आसेपासेसहित आफ्ना पितालाई पदक दिलाएका थिए। निर्णय गर्नेहरूको अकर्मण्यताका कारणा राज्यले प्रदान गर्ने सम्मान विवादित बन्ने गरेको हो। गणतन्त्र दिवसमा प्रदान गरिने पदक गृह मन्त्रालयले सिफारिश गर्नेगर्छ।